लकडाउन अन्त्य गर्नु सरकारको गल्ति ? – Suchana Hub
लकडाउन अन्त्य गर्नु सरकारको गल्ति ?
काठमाण्डौ । नेपालमा लकडाउन अन्त्य भएसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढेको स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । यसको रोकथामका लागी सरकारले कुनै किसिमको आवश्यक आधार तयार नगरी लकडाउन हटाएकाले जोखिम झनै बढेको विज्ञहरूले बताएका हुन् । नेपाल चैत्र ११ गते देखि पूर्ण रुपमा लकडाउनको अ*वस्थामा रहेको थियो । चैत्र ११ गते एक हप्तालाई ल* कडाउन गरिने घोषणा भएको थियो भने त्यसपछि पटक पटक थपेर ल*क्डाउनको अवधी साउन ७ गतेसम्म लाइ तो*किएको थियो भने यहि साउन ७ गतेदेखि लकडाउनको अन्त्य भएको हो ।
यसरी कुनै तयारी बिना लकडाउन खोल्दा कुनै पनि बेला कोभिड–१९ संक्रमणको विस्तार व्यापक हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् । लकडाउन खोलेपछि संक्रमितको संख्या थप बढ्ने भए पनि सरकारले त्यस अनुसारको सबै तयारी गर्न नसकेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । यस विषयमा बोल्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले संक्रमित बढिरहेको यस अवस्थामा लकडाउन टुंगियो भन्दा अलि नमिलेजस्तो देखिन्छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
यस विपदको समयमा लकडाउन खोल्नका लागी केही आधारहरू पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले समेत चारवटा आधार भएमा मात्र लकडाउन हटाउन सकिने भनेको छ, तर नेपालले यो नियमको पनि पालना गरेन र कुनै आधारबिना लकडाउन खोलेको उनको भनाई छ । लकडाउनपछि कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा सरकार तथा सर्वसाधारण सबै सुसूचित हुनुपर्छ । साथै राज्य तथा सम्बन्धित निकायले लकडाउन खुलेपछि नयाँ सामान्यीकरणमा सुरक्षित हुने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।
यस्तै उहाँले डब्लूएचओले तोकेका चारवटै आधार पूरा भएको सुनिश्चित भएपछी मात्र लकडाउन खोल्नुपर्ने भनेर बताउनुभएको छ । सरकारले डब्लूएचओले भनेको कुनै पनि आधार पूरा नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले अब कुनै पनि बेला नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने र पुनः लकडाउनमा फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिनु भएको छ । ‘अरू त अरू, तर हामीकहाँ लकडाउन हुँदा र खुलेपछि बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालको तयारीसमेत खासै फरक छैन ।’ डा. कार्कीले भन्नुभयो ।
Tags: lockdown, nepal
Previous सञ्चालनमा आए सवारी साधन, सडकमा बढ्यो चाप
Next कक्षा १२ को परीक्षाको मिति तोकियो